Cabinetmakers Kwaye Bena nabakhi Job Inkcazelo / Imisebenzi noxanduva Sample – JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Cabinetmakers Kwaye Bena nabakhi Job Inkcazelo / Imisebenzi noxanduva Sample
Cabinetmakers Kwaye Bena nabakhi Job Inkcazelo / Imisebenzi noxanduva Sample
superadmin Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga Shiya amazwana 688 Views
isilayi, kumisa okanye ubuthe isiqulatho ngomthi, nenkangeleko kunye nomsebenzi ezininzi jointers izixhobo zokusebenza ezahlukeneyo, kunye mortisers ukuba bazakhele components izinto eyenziwe ngomthi okanye imilo, okanye indawo, iinkuni cut.
Ukuvelisa okanye ukwakha components izincedisi umzekelo umthengisi, iimveliso ofisi, cabinetry, okanye ifanitshala kwibakala eliphezulu.
Hlola imilinganiselo okanye ukuhlola iziqwenga’ standard okanye umdlalo ukuqinisekisa ukuthotyelwa kwemigaqo.
Cwangcisa okanye umsebenzi izixhobo, kubandakanya iisarha energy, jointers, mortisers molders, okanye shapers, ufane, ukunciphisa, okanye nokubumba Woodstock okanye iinkuni ethutyana.
Ukuphonononga ithegi Amanani iinxalenye-ephepheni okanye nemithi isitokhwe nje kokuba kusikwe, uyilo elandelayo, ukwenza ethile into endilisekileyo nempilo kunye nogqweso.
Ukomeleza amathambo usebenzisa izinto zokubopha ukuba ezahlukeneyo okanye toenails ukufumana ready malunga luphethe.
Ukuncamathisela okanye subassemblies kunye ukwenza imifuziselo ezigqityiweyo, sisebenzisa yamasango, izikhonkwane, izikhonkwane, izinto zokubopha, okanye epoxy.
Chonga amanqaku’ iimpawu eziza kuvezwa okanye ezisisigxina okanye imisebenzi inkqubo okanye isicwangciso ngenxa nezipili okanye ekudaleni iindawo, ngokusekelwe imiyalelo amazinyo okanye ebhalwe, imizobo, imifanekiso, okanye zokwakha.
sihlahla aphantsi ukuya ekunene-ubungakanani kunye noyilo, inqumle izinto amathambo ukuba ezithile isuti efudumeleyo, zisebenzisa izixhobo ngesandla, ezifana for noDorothy umzekelo, zokutshweza.
izinto Ukudlalela texture, okanye kombala, izinto, ukunika ingqalelo kwezinye iinkalo phezulu ngemithi okanye amaqhina.
Idla, udaka, okanye iindonga okanye amalungu acocekileyo ukulungiselela izithuba malunga ngokugcwalisa.
iipokotho wamzalela ukuze kufakelwe izinto zokubopha okanye izikhonkwane, nokusebenzisa izixhobo ukuba bayandidika okanye nge-ngesandla.
Yenza lokugqibela ukusebenza-eziluncedo usebenzisa sandpaper okanye intsimbi wool.
Faka izakhi, ezifana for yeehenjisi umzekelo, kokuqonda, kuso-, noma ekhishini kuso-, sisebenzisa handtools.
Buyisela ulungise izincedisi, nekhabhathi, ifanitshala ngomthi, elibele, okanye amanye amalungu.
Oomatshini ukuba isetyenziswa computers indlela.
iintlobo-apreyizali imiqulu, okanye iindleko iindleko zezinto ezifunekayo.
Ukuqalisa Masonite, imithombo formica livela.
impahla Style, zokuqasha iiphakheji umzobo pc-abasomelezayo.
Dip, ezihlambulukileyo, okanye ibandla spray amanqaku besebenzisa Ipeyinti izithambiso okanye yokuvikela, ezifana uphawu, ivanishi, umbala, okanye lacquer.
Zoba iinkcukacha ezibanzi kwaye sihlolisise iiprojekthi ukuba iiklayenti.
Ukufunda izivakalisi Isicatshulwa-Ukuqonda kunye nesiqulatho ebhalwe doc umsebenzi ezinxulumene.
Active Ukuphulaphula-Ukunika ulwazi ngokupheleleyo oko abanye abantu kungoku bathi, usebenzisa ixesha namandla ukuqonda ukuba wadala iinkcukacha, imibuzo ecela ngendlela efanelekileyo, kwaye zange mesmerizing maxa wambi ukuba ezingafanelekanga.
Ukuvelisa-Ephepheni kungekhona nje ezingafanelekanga ukuba ukuswela zemalike lokunxibelelana ngempumelelo.
Ukuthetha-Ukuthetha-kwabanye ukudlulisa izibakala eyiyo.
Math-Isebenzisa maths ukulungisa imiba.
Uphando-Isebenzisa izisombululo kunye nemithetho ezilawulwa ukusombulula iingxaki.
Criticalthinking-Ukusetyenziswa logic kunye nesizathu ubone eziluncedo kunye nobuthathaka ezinye iindlela, iziphumo okanye iindlela ekhokelela engxakini.
Active Learning-Ukuqonda iingenelo leefekthi into entsha izigqibo ngamnye zokusombulula iingxaki ezizayo kunye nasenamava kunye neendawo.
Ukufunda Strategies-Ukukhetha nokusebenzisa izicwangciso educationPERtutorial neenkqubo ezifanelekileyo ingxaki xa sele uyincutshe ekudlaleni okanye imfundiso kwemiba ezintsha.
Ukubeka iliso-Ukongamela / Ukuhlolisisa ukusebenza ngawe, abantu nezinye, okanye ii-arhente athathe amanyathelo olungiso okanye ukwenza intuthuko.
Social Perceptiveness-Ukwazi othersA reactions kutheni baphendula xa benza kunye ekuqondeni.
izenzo Control-Ilungisa ngokunxulumene amanyathelo othersI.
Marketing-olululo nabanye ukuphucula iingcinga okanye nokuziphatha kwabo.
Mediation-Ukufumana abanye ngokuhlangeneyo nokuzama axolelanise ombane.
Ukufundisa-Ukuqeqesha abanye indlela bafudukele.
Orientation-Ngokuqinisekileyo Company ekufuneni iindlela ukuxhasa abantu.
Complex Problemsolving-Ukumisela nemiba enzima siphanda iinkcukacha ezinxulumene bokuvavanya kwaye ukuba ukwakha ukukhetha nokusebenzisa iimpendulo.
Amashishini Analysis-Ukuhlolisisa iimfuno lento kwaye ufuna ukwenza isimbo.
Engineering Design-Ukungqamanisa iimpahla okanye ekudaleni kunye nobuchwepheshe ukuba sikhonze iminqweno umntu.
Izixhobo Ukukhethwa-Ukumisela uhlobo izixhobo kunye nezixhobo kwafuneka imfuneko yokwenza umsebenzi.
Izavenge-Ukongeza iingcingo ezihamab phantsi, imishini, izixhobo, okanye iipakethe ukuhlangabezana neemfuno ngokubanzi.
iinkqubo computer Development-Publishing kwizicelo ezahlukeneyo.
Imisebenzi iminxeba Monitoring-Z, into yokulinganisa, okanye neminye imiqondiso ukuqinisekisa kukho isixhobo esisebenza ngempumelelo.
Ukusebenza kunye Control-Ukusingatha imisebenzi isixhobo okanye izixhobo.
Ulondolozo-Kusetyenziswa nokulungiswa kuyinto eqhelekileyo kwizixhobo nokumisela nini kwaye yintoni uhlobo yesondlo kuyimfuneko.
Zokusombulula-Ukukhetha izinto ngasemva iimpazamo ukuba ziyasebenza kwaye isigqibo ukuba uqhubeke njani ngalo.
izixhobo okanye izixhobo kusetyenziswa izixhobo ezinqwenelwa Balungisa-belungisa.
Quality-Control Examination-Ndiqhuba uvavanyo kunye nophando izinto, iinkampani, okanye iinkqubo ukuze alinganise ukusebenza okanye umgangatho.
Ubulumko Decision Making-ingqalelo iintlawulo isalamane kunye iingenelo amanyathelo kusenokwenzeka ukuba ufumane enye ifanelekileyo.
Systems Analysis-kukhangelwa ukuba luhlobo luni na indlela kufuneka isebenze kunye nendlela utshintsho izifo, amashishini, kunye ezisingqongileyo ziya nempembelelo iinzuzo.
Methods Evaluation-Ukuchonga amanyathelo okanye iimpawu performance kwakhona xa kuthelekiswa neethagethi zenkqubo, efanelekileyo okanye amanyathelo ukuze kuqiniswe ukusebenza.
Time Management-Ukulawula abanye’ xesha kwaye oneis ixesha lobuqu.
Ulawulo Savings-Ukuchonga ingeniso iza Akuthandabuzeki ukuba kusetyenziswa njani ukuze umsebenzi owenziwa, kunye neentengiso mayelana nala inkcitho.
Kweliso iziyobisi Imithombo-Ukufumana nokubona malunga nokusetyenziswa ngokufanelekileyo izixhobo, izakhiwo, kunye nezibonelelo kwafuneka imfuneko ukwenza ethile asebenza.
Supervision of Workers Resources-Ukukhuthaza, isakhiwo, kwaye uzimisele abantu ngenxa yokuba basebenza, yokwahlula abantu kakuhle umsebenzi wakho.
Diploma High-School (okanye kuGedaliya okanye Senior School ukulingana Document)
Engaphezulu kwe 2 iminyaka, emhlabeni kwaye kubandakanya iminyaka EZINE
Ukuphikelela – 87.53%
umzamo – 85.38%
Phele Abanye – 88.33%
Orientation Cultural – 88.54%
Ukuzibamba – 89.23%
nokuvumelana – 90.80%
Ingqalelo Iinkcukacha – 94.12%
amandla – 88.16%
sicinga – 86.80%